गंगा नदीमा फेला परेको यो माछाबाट बैज्ञानिकहरु हैरान, फैलियो डर ! « गोर्खाली खबर डटकम
वाराणसीमा नाविकहरूले रामनगरको रम्ना हुँदै बग्ने गंगा नदीमा अनौंठो माछा फेला पारेका हुन् । बीएचयूका माछा वैज्ञानिकहरूले यसलाई दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा फेला पर्ने सकरमाउथ क्याटफिसको रूपमा पहिचान गरेका छन् ।
वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरे कि यो माछा मांसाहारी हो र यसले पर्यावरणलाई पनि खतरामा पार्न सक्दछ । यसैले यो माछा यहाँसम्म आउँनु डरको विषय छ ।
नदीहरूले आफ्नो गहिराइमा धेरै रहस्यहरू लुकाएका हुन्छन् । वाराणसीको रामनगर गाउँको रम्ना गाउँमा डल्फिनको संरक्षण र उद्धारमा संलग्न गंगा प्रहारिसको टोलीले माछाको रूपमा अद्भुत फेला पारेका हुन् । उक्त माछा गंगा नदी मात्र होईन, बल्कि भारत र दक्षिण एशियामा पनि कतै फेला परेको थिएन् ।
अनौंठो अनुहार भएको माछा हेर्दा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा पाउनेजस्तो देखिएको थियो । हजारौं किलोमिटर टाढा पाउने सुकरमाउथ क्याटफिस जस्तो देखिन्थ्यो ।
भारतीय वन्यजीव संस्थान र नमामि गंगे योजनासँग सम्बन्धित जलीय जन्तुहरूको संरक्षणका लागि काम गर्ने गंगा प्रहरी दर्शन निषादले आफुले डल्फिनको संरक्षणको क्रममा दोस्रो पटक यो अनौंठो माछा फेला पारेको जानकारी दिएका छन् ।
पहिलो सुनौलो रंगको माछा फेला पर्‍यो, जुन भारतीय वन्यजीव संस्थानले अमेरिकी अमेजन नदीमा भेटिएको साकमाउथ क्याटफिसको रूपमा पहिचान गरेको थियो । तर फेरि दोस्रो पटक पनि यो प्रजातिको माछा फेला पारियो ।
वैज्ञानिकहरूले दावी गरे कि यो माछाले गंगाको पर्यावरणलाई बिगार्न सक्छ । वैज्ञानिकहरूले यो पनि बताए कि उक्त माछा गंगामा फेला परेपछि छोड्न हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ कि हजारौं किलोमिटर टाढा दक्षिण अमेरिकाको अमेजन नदीमा पाउने सार्कमाउथ क्याटफिस कसरी गंगा नदीमा पुग्यो ?
यसको उत्तर बीएचयूको जीव वैज्ञानिकहरूसँग थियो । माछा वैज्ञानिक प्रोफेसर बेचनलालले भने, ‘यो माछा दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ, जसलाई सकरमाउथ क्याटफिस भनिन्छ ।
तपाईको राशिअनुसार दिन यस्तो रहनेछ – हेर्नुहोस राशिफल
२० बर्षे जवानीमा खुलेकी माल्भिका, हेरौं हट अवतार फोटो फिचर सहित